आजको राशिफल: बि सं २०७७ साल भदौ १३ गते शनिबार तदानुसार इश्बी सन २०२० अगस्ट २९ तारिख, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस दैनिक राशिफल! – Butwal Sandesh
आजको राशिफल: बि सं २०७७ साल भदौ १३ गते शनिबार तदानुसार इश्बी सन २०२० अगस्ट २९ तारिख, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस दैनिक राशिफल!
शारीरिक थकान तथा मानसिक तनाब महशुस गर्नुहुनेछ। क्रोध तथा वाणीमा संयम राख्नुहोला। कार्यक्षेत्रमा परिस्थिति अनुकूल नहोला। कुनै धार्मिक तथा मांगलिक कार्यमा उपस्थित हुने अवसर मिल्नेछ।
शारीरिक तथा मानसिक रूपले अस्वस्थ रहनुहुनेछ। नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि समय उत्तम छैन। खान-पानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। यात्रा गर्दा विशेष सावधान रहनुहोला। निश्चित समयमा कार्य सफल नहुँदा मन चिन्तित रहला।
परिवारजन तथा मित्रगणका साथ रमणीय समय बित्नेछ। मनोरन्जन क्षेत्रमा खर्च हुनेछ। सामाजिक मान-सम्मान बढ्नेछ। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ । आर्थिक समस्याले सताउन सक्छ।
तपाईंको यस दिन आनन्दपूर्वक बित्नेछ। कार्यक्षेत्रमा परिस्थिति अनुकूल रहनेछ। परिवारमा आनन्दमय रूपले समय बित्नेछ। आवश्यक क्षेत्रमा खर्च हुनेछ । आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ ।
शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। सिर्जनात्मक तथा कला क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। सन्तानबाट शुभ समाचार प्राप्त हुने देखिन्छ। मनमा परोपकारी भावना उत्पन्न हुनेछ। मित्रगणका साथ रमणीय भेटघाट हुनेछ।
शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको अनुभव गर्नुहुनेछ। परिवारको सदस्यको साथ मनमुटाव हुनसक्छ। आमाको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान राख्नुहोला। नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि समय शुभ छैन। खर्चमा वृद्धि हुनेछ।
भाग्य वृद्धिको योग रहेको छ। भाई-बहिनीसँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। नयाँ कार्य प्रारम्भ गर्नको लागि समय अत्यन्त शुभ रहेको छ। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। सामाजिक मान-सम्मान प्राप्त हुनेछ।
परिवारमा सुख- शान्तिमय वातावरण रहनेछ। मनमा नकारात्मक भावना उत्पन्न होला। अनावश्यक खर्च हुँदा आर्थिक समस्या आउनसक्छ। विद्यार्थी वर्गको लागि समय अनुकूल छैन। वाणीमा संयम राख्नुहोला। धार्मिक कार्यमा मन लाग्नेछ।
धन लाभको योग रहेको छ। शारीरिक तथा मानसिक रूपले प्रशन्न रहनुहुनेछ। यात्राको योग बन्ने देखिन्छ। सोचेको काम पूरा हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ। आफन्तजनसँग भेटघाट गर्ने अवसर मिल्नेछ। सामाजिक मान-प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ।
स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा धन खर्च हुने देखिन्छ। आफन्तजनसँग मनमुटावको स्थिति आउनसक्छ। धनहानि तथा मानहानिको योग रहेको छ। वाणीमा संयम राख्नुहोला।
नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि समय उत्तम रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा विशेष लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा मान-सम्मान मिल्नेछ। आयका स्रोत बढ्नेछन्। यात्राको योग रहेको छ।
कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारी तपाईंसँग प्रशन्न रहनेछन्। व्यापार क्षेत्रमा समय अत्यन्त शुभ रहेको छ। आफू भन्दा ठूला तथा बुवाबाट लाभ मिल्ने देखिन्छ। परिवारमा आनन्दमय वातावरण रहनेछ।